Yenza i-USB stick bootable kwaye uyile ngezixhobo zakho
ikhaya/imiyalelo/Yenza intonga ye-USB eqalekayo ngezixhobo zakho
Vangelis19. Epreli 2015
Mhlawumbi sele ucinge ngokufaka iWindows kwintonga ye-USB. Kukho izixhobo ezininzi phaya ezinokukunceda wenze i-USB stick bootable. Kodwa kunokwenzeka ngeWindows ukwenza i-USB iqaleke ngezixhobo zakho ebhodini. KwiWindows oku kunokwenziwa ngamanyathelo ambalwa alula kwaye intonga ye-USB inokusetyenziswa njengesixhobo sokuhambisa idatha.
Siza kukubonisa indlela ekulula ngayo koku kulandelayo:
Yenza intonga ye-USB eqalekayo
Faka intonga ye-USB ofuna ukuyenza kwikhompyuter yakho.
Cofa indibaniselwano yesitshixo "Windows + X"Kwaye ukhethe"Umyalelo wokuyalela (umlawuli)".
Kwiwindow entsha ngena "diskpart“Kwaye ucinezele iqhosha lokungena.
Ukuba ngoku "UKUHLAWULA>"Iyavezwa, ngenisa umyalelo"uluhlu lwe disk“Kwaye ucinezele iqhosha lokungena ukubonisa zonke iidrives ezikhoyo.
Ngena ngoku "khetha i disk 2"("2Imisa inani le-USB ofuna ukuyenza).
Emva koko ngena "Khetha isahlulelo 1“Kwaye ucinezele iqhosha lokungena
Ukuze ukwazi ukuqhubeka, kufuneka usebenzise i Intonga ye-USB ifomathi ngokudibanisa "ifomathi fs = fat32“Abangenayo.
Ngokukhawuleza xa ukufomatha kugqityiwe, faka umyalelo "osebenzayo" kwaye ucinezela ukhiye wokungena ukwenza i-USB stick bootable.
Intonga ye-USB iyaqala ngoku.
QAPHELA: kukho into engekhoyo!
Ngoku kuya kufuneka ukope umxholo weDVD yokufaka yeWindows okanye umxholo wefayile ye-ISO (umzekelo 10 Windows).
Vula unzip i ISO kwaye ukhuphele umxholo uphela kwintonga ye-USB eqalekayo.
Yiyo leyo sele ikhona. Intonga ye-USB iyaqala kwaye ungayisebenzisa ukuqala ikhompyuter kwaye ufake iiWindows.
Nceda uqiniseke ukuba ukulandelelana kweziqalo kwikhompyuter yakho kusetelwe kwi-USB
IFirefox Turbo izihlandlo ezili-100 ngokukhawuleza
Thintela iFirefox ekwehliseni nasekuhlaziyeni
Qwalasela iqhosha lokucima
Iifolda Iifayile azinakucinywa
Umhleli weRegistry -indlela emfutshane kwitreyi yenkqubo
Yenza uguqulelo oluphathwayo lweFirefox ngokwakho
Yeyiphi iprosesa efakiweyo? Fumana iindlela ezi-8
IFirefox 71 -Ukubonisa ibha yokuskrola yeengcebiso zedilesi kwi-Urlbar> Hlaziya
Asinakucacisa i-USB windows 10